June 2021 – Page2– MC Tv Club
ငါ့အကိုကို ပိုက်ဆံ ၃သိန်းနဲ့ တန်းဖိုးဖြတ်တယ်လိုဆိုလိုက်တဲ့ ရေမွန်ညီမလေး
ငါ့အကိုကို ပိုက်ဆံ ၃သိန်းနဲ့ တန်းဖိုးဖြတ်တယ်လိုဆိုလိုက်တဲ့ ရေမွန်ညီမလေး ယခုညမှာတော့ online ပေါ်မှာ ပိုက်ဆံသုံးသိန်းကိစ္စလူပြောများလာခဲ့ပြီး။ လွန်ခဲ့သောနေ့တွေကလည်း ရေမွန်ကောင်မလေးဖြစ်သူအမေဖြစ်သူစကားကြောင့် ပရိတ်သတ်တစ်ချိူ့က ဒေါသထွက်ခဲ့ရပါတယ်။ “ ကျမ သမီးလေးကို အပြစ်ပြောနေသူများရှင်..သမီးကို ကျမက မလွှတ်တာပါသူအရမ်းသွားချင်ခဲ့ပါတယ်သူအခု အရမ်းပင်ပန်းပြီး ဖျားနေပါတယ်အဖျား ၁၀၂ F က ကျလိုက် တက်လိုက်နဲ့အရမ်းလဲ အားနည်းနေပါတယ်အချိန်တိုင်းလည်း ငိုနေရလို့ ပင်ပန်းလှပါပြီကျမက သူ့ကို …
သူငယ်ချင်းရေမွန်ရဲ့ အရိုးပြာနဲ့ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခဲ့ပြီး ကမ်ပိန်းတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ နိုဗန်ထူး
သူငယ်ချင်းရေမွန်ရဲ့ အရိုးပြာနဲ့ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခဲ့ပြီး ကမ်ပိန်းတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ နိုဗန်ထူး ရေမွန်ကို သတိရခြင်း အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ကမ္ဘာမြေကို အ ကျိုးပြုစေတဲ့ သစ်ပင်တွေကို ကိုယ်စီ စိုက်ပျိုးကြဖို့New Raymond Tree ဆိုတဲ့ သစ်ပင်စိုက် ကမ်ပိန်းလေးကို ရေမွန်နဲ့ ညီအစ်ကိုလို့ ခင်မင်ရင်းနှီ းခဲ့တဲ့ အဆိုတော် နိုဗန်ထူးက စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ရေမွန်ကို သတိရခြင်း အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ကမ္ဘာမြေကို …
အင်ဒိုနီးရှားမှာ ထပ်တိုး ကိုဗစ်ပိုးတွေ့သူ ၂၁၀၀၀ ကျော်ဖြင့် တစ်နေ့တာ ပိုးတွေ့ဦးရေ စံချိန်တင်
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ စနေနေ့က ထပ်တိုး ကိုဗစ်ပိုးတွေ့သူ ၂၁၀၉၅ ဦးရှိခဲ့ကာ တစ်နေ့တာ ပိုးတွေ့ဦးရေ အများဆုံးဖြစ်ခဲ့ကြောင်းနဲ့ နိုင်ငံရဲ့ စုစုပေါင်း ပိုးတွေ့လူနာ ၂၀၉၃၉၆၂ ဦးရှိလာခဲ့ကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်တဲ့ အချက်အလက်တွေအရ သိရပါတယ်။ ကိုဗစ်ကြောင့် ထပ်မံသေဆုံးသူ ၃၅၈ ဦးရှိခဲ့တာကြောင့် စုစုပေါင်း သေဆုံးဦးရေ ၅၆၇၂၉ ဦး ရှိလာပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားဟာ အရှေ့တောင်အာရှမှာ ကိုဗစ် …
Boycott လုပ်တာကိုမကျေနပ်၍ ဘာသာရေးမှိုင်းတိုက်မူများရှိနေ Boycott အောင်မြင်တယ်ဆိုတာယခုအချိန်ထိတော့တိတိကျကျအောင်မြင်မူမရှိသေးဘူးလို့ပဲမြင်ပါတယ်။ အခုလက်တစ်လောပြောရရင် ဖြူဖြူထွေးကိုပဲကြည့်ရရင် လုပ်ငန်းပေါင်း (၂၀)ကျော်ကကြော်ငြာတွေ ဖြုတ်ချခဲ့ပေမယ့် ၊ Boycott အောင်မြင်တယ်လို့မပြောနိူင်ပါဘူး။ ယခုနောက်ပိုင်းမှာ Boycott လုပ်ခံရသည့် အနုပညာရှင်တစ်ချိူ့ဟာ ဘာသာရေးမှိုင်းတိုက်မူများဖြင့် တစ်ဖက်လှည့်အာရုံးပြောင်းလာခဲ့ကြပါတယ်။ Boycott လုပ်နေခြင်းသည် အာဏာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်နေခြင်းသာဖြစ်ပြီးဘာသာရေးနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါ။ Boycott စနစ်ကြီးပြိုလဲသွားအောင် ဘာသာရေးမှိုင်းတိုက်ပြီးဖြိုခွဲပစ်တာမျိူးတွေ့နေရပြီး။ လူငယ်တစ်ချိူ့ကိုတောင်းဆိုချင်တာက ထိုသို့ဘာသာရေးမှိုင်းတိုက်နေသည့် အရာများကို မပါဝင်ပဲ။ အာဏာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်သည့် …
မန္တလေး ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် အင်တာဗျူး ဖြေကြားခြင်းမပြုလုပ်တော့ကြောင်း ထုတ်ပြန်
မန္တလေး ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် အင်တာဗျူး ဖြေကြားခြင်းမပြုလုပ်တော့ကြောင်း ထုတ်ပြန် ဇွန် ၂၆ မန္တလေး ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်MDY-PDF အနေနဲ့အင်တာဗျူးဖြေကြားခြင်းလုံးဝမရှိတော့ဘူးလို့ ဒီနေ့ရက်စွဲနဲ့ MDY-PDF ပြန်ကြားရေး ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ “MDY-PDF အနေဖြင့် စစ်အာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေးကိုတစ်စိုက်မတ်မတ်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။သို့သော် MDY-PDF ၏ logo နှင့် Letter Head အတုကို အသုံးပြုကာ MDY-PDF နှင့် EAOs များ ဒီမိုကရေစီထောက်ခံအားပေးကြသူများနှင့် …
ဧရာဝတီတိုင်းထဲက ကျောင်းတွေမှာ ကိုဗစ်ကူးစက်မှုမြင့်တက်လာပေမယ့် Maskတပ်ပြီး စာသင်ဖို့ စစ်ကောင်စီညွှန်ကြား ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းက မြောင်းမြမြို့၊ မအူပင်မြို့၊ လပွတ္တာမြို့တွေမှာ ကျောင်းဆရာမတွေနဲ့ကျောင်းသား ကျောင်းသူအချို့ ကိုဗစ်ကူးစက်ခံနေရပေမယ့် စာသင်ကျောင်းတွေကို ယာယီရပ်နားခြင်းမရှိဘဲMask တပ်ပြီး စာဆက်သင်ကြားဖို့ စစ်ကောင်စီရဲ့ လက်အောက်ခံ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးပညာရေးမှူးရုံးကအကြောင်းကြားစာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ မြောင်းမြမြို့မှာ စာသင်ကျောင်း ၃ကျောင်းမှ ဆရာမတွေအပါအဝင် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူအချို့ ကိုဗစ်ကူးစက်ခံခဲ့ရသော်လည်း ကျောင်းများကို ယာယီရပ်နားခြင်းမရှိဘဲ ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်နေတာကြောင့် မိဘတွေအနေနဲ့ကလေးတွေကို …
Facebook မှာ Post တင်မှတော်လှန်းရေးလို့ထင်နေရင် ငါကိုလည်း Boycott စာရင်းသာထည့်လိုက်ပါဆိုတဲ့ ၊ ရဲရင့်အောင် လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာလည်း တက်ကြွစွာ ပါဝင်ခဲ့ပြီး နေ့စဉ် လမ်းပေါ်ထွက်ပြီး ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ အခြေအနေအရပ်ရပ်ကြောင့် ဘေးကင်းရာသို့ တိမ်းရှောင်နေရတာကြောင့် သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားနေမှုတွေကို အပြည့်အစုံ မဝေမျှနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့ညက သူ့ရဲ့ Facebook Story မှာ တော်လှန်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာလှုပ်ရှားမှုမှမတွေ့လို့ အပြစ်တင် ဝေဖန်နေတဲ့ လူတစ်ချို့ ချက်ကျလက်ချ ပြန်ရှင်းပြလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ ဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်၊ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုနေခဲ့ရတယ်ဆိုတာ အကုန်ထုတ်ပြောပြီး ကိုယ့်သေတွင်း ကိုယ်တူးပြမှ၊ နေ့စဉ် ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကို Facebook မှာ post တင်ပေးနိုင်မှ တော်လှန်တယ်လို့ သတ်မှတ်နေတယ်ဆိုရင် သူ့ကိုလည်း boycott စာရင်းထဲသာ ထည့်လိုက်ကြဖို့ စိတ်မကောင်းစွာ အခုလိုရေးသားလာခဲ့ပါတယ်။ ” ဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ် ဘယ်လိုတွေ လုပ်ခဲ့ရတယ် အခုဘာတွေလုပ်နေတယ် ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုနေနေရတယ်ဆိုတာတွေကို အကုန်ထုတ်ပြောပြပြီး ကိုယ့်သေတွင်းကိုယ်တူးပြမှ ၊ နေ့စဉ်ဖြစ်သမျှ သတင်းတွေကို အများနဲ့တန်းတူ နားစွင့်နေရတဲ့ အခြေအနေမျိုးထဲ ၊ သူများလာပြောပြမှ သိရတဲ့ အခြေအနေမျိုးထဲ နေ့တိုင်း Facebook မှာpost တွေ တင်ပေးနိုင်မှ တော်လှန်နေတယ်လို့ သတ်မှတ်တယ်ဆိုရင်တော့ ငါ့လည်း boycott စာရင်းထဲသာ ထည့်လိုက်ပါတော့ကွာ ဆုံးရှုံးစရာလည်း ကုန်သွားပါပြီ။ ငါဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာ ငါပဲသိတယ်။ February (၁) ရက်နေ့မနက် (၆) နာရီကစပြီး ငါလုပ်သမျှအရာတွေက မင်းတို့သဘောကျဖို့အတွက် မဟုတ်ဘူး။ ငါ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ငါပါ အားတဲ့အချိန် စိတ်ထွက်ပေါက်အနေနဲ့ သုံးတဲ့ Instagram ပို့စ်တွေအောက်မှာ အာလာချောင်တာတွေ ရပ်ပါတော့ ငါတို့လုပ်စရာရှိတာတွေကို တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ သိုသိုသိပ်သိပ်လုပ်နေလို့ မရဘူးလား? ” ဆိုပြီး ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Boycott တကယ်အောင်မြင်လာပြီလား? Boycott အောင်မြင်တယ်ဆိုတာယခုအချိန်ထိတော့တိတိကျကျအောင်မြင်မူမရှိသေးဘူးလို့ပဲမြင်ပါတယ်။ အခုလက်တစ်လောပြောရရင် ဖြူဖြူထွေးကိုပဲကြည့်ရရင် လုပ်ငန်းပေါင်း (၂၀)ကျော်ကကြော်ငြာတွေ ဖြုတ်ချခဲ့ပေမယ့် ၊ Boycott အောင်မြင်တယ်လို့မပြောနိူင်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ပါးစပ်ကသာ Boycott လုပ်နေကြပေမယ် Video တွေ ဓာတ်ပုံတွေတတ်လာရင် ကိုကိုယ်တိုင်က ကြည့်ရူသူတစ်ယောက်အဖြစ်ပါဝင်နေကြပါတယ်။ မုန်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒေါသဖြစ်ဖြစ်လို့ပဲကြည့် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော်တို့ကြည့်ဖြစ်လိုက်ကြပါတယ်။ အဲ့လိုကြည့်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် အားပေးသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပါဝင်သွားပြီဆိုတာပါပဲ။ ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင် အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ကို Boycott …
မြန်မာပြည်ကလူတွေအလုပ်မအပ်တော့ရင်တောင် ထိုင်းဘက်ကကြော်ငြာတွေလက်ခံနေရပြီဆိုတဲ့ နေဆန်း
ချစ်လှစွာသောပရိတ်သတ်ကြီးရေ ဖေ့စ်ဘုတ်ဆယ်လီနေဆန်းကတော့ ..သူများနဲ့မတူတမူထူးခြားတဲ့ ..ဟာသလေးတွေတင်ဆက်ရင်း လူသိများလာခဲ့တဲ့သူတစ် ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ လှပတဲ့မျက်နှာအမူအရာ အပြောအဆိုတွေကြောင့် လူအများရဲ့အားပေးမှုကို… ပိုင်ဆိုင်ထားသူ တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ပြင် နေဆန်းကပရိသတ်တွေအားပေးမှုကြောင့် ရရှိလာခဲ့တဲ့ ဝင်ငွေများဖြင့် သိန်းထောင်ချီ တန်သောအိမ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဆောက်လုပ်… နေထိုင်လာနိုင်လာ ခဲ့ပါတယ် နေဆန်းက လက်ရှိမှာတော့ သူဝါသနာပါတဲ့အလုပ်တွေ ကိုလုပ်ကိုင်ရင်း ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိကာ အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိဆွတ်ခူးနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။ နေဆန်းကလည်းသူ့ရဲ့အလုပ်ကို အာဏာသိမ်းခံထားရချိန်တောင်မှ …
စစ်ကောင်စီကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံးICC တွင် တရားစွဲနိုင်ရန်အတွက် NUG က ရောမ သဘောတူစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရန် ပြင်ဆင်နေ
အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကျူးလွန်ခဲ့သည့်များအတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICC တွင် တရားစွဲနိုင်ရေးအတွက် NUG အနေဖြင့် ရောမသဘောတူစာချုုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရန်ပြင်ဆင်နေကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမိုးဇော်ဦးက ယနေ့ပြုလုပ်သည့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ပြောခဲ့သည်။ ICC ကိုသွားဖို့ လမ်းကြောင်း အမျိုးမျိုးရှိတဲ့အထဲမှာ ရောမသဘောတူစာချုပ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအနေနဲ့ တင်တာကအသင့်တော်ဆုံးလို့ ယူဆတဲ့အတွက် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအဖြစ် လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ဖို့ ရှေ့နေတွေနဲ့ တိုင်ပင်နေပါတယ်” ဟု ဦးမိုးဇော်ဦးက ပြောသည်။ ထို့သို့လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရေးအတွက် ကုလသမဂ္ဂ၏ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအပေါ် …